Thursday October 04, 2018 - 14:15:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Duqeynta ugu xoogan ayaa ka dhacday xaafadda loo yaqaano Makka ee caanka ku ah 'Qansax Oomane' halkaas oo ay diyaarado ku garaaceen dhowr gantaal.
Inkastoo duqeyntu ay ahayd mid xooggan oo socotay muddo saacado ah sida ay dadka deegaanku sheegeen, hadana Allaah fadligii khasaaruhu waa mid aad uga yar sida la filayey.
Ma jiro khasaare dhimasho oo soo gaaray dadka deegaanka, waxaase jira burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaasha ku yaalla xaafadda la beegsaday.
Dadka deegaanka ayaa guryahooda isaga kala cararay durbaba markii ay maqleen jugtii ugu horeysay, waxaana la sheegay in guryaha la beegsaday iyadoo ay inta badan dadkii daganaa ka kala tageen.
Dadka ugu badan ee ku dhaawacmay duqeynta waa dumar iyo caruur kuwaas oo hadda lagula tacaalayo goobo caafimaad oo ku yaalla magaalada Ceel-Cadde.
Duqeynta waxaa geystay diyaarado dagaal oo uu leeyahay Mareykanka inkastoo uusan jirin war rasmi ah oo ilaa hadda ka soo baxay military-ga Mareykanka.
Mareykanka ayaa mudooyinkii la soo dhaafay kordhiyey duqeymaha wuxuushnimo ee sida indha la'aanta ah u beegsanaya dadka rayidka ah tan iyo markii talada dalkaas la wareegay hogaamiyaha cunsuriga ah ee Trump, waxaana xusid mudan sidan oo kale ay dhawaan diyaaradahooda u duqeeyeen degmada Saakoow, halkaas oo ay ku burburiyeen isbitaalkii degmada, iyo madaraso diini ah oo ku taallay degmadaasi.
Halkaan Ka Daawo Sawirada Burburka Ka Dhashay Duqeyntii Ceel-Cadde